Mauto Okanganisa Nyaya yeKunyorwa KweBumbiro reMutemo
Chivabvu 11, 2012
Nyaya yekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika inonzi yasvika pakaomesesa zvekuti inogona kugurirwa panzira mushure mekunge vakuru vemauto, vachishanda nevakaoma musoro muZanu-PF, vabuda pachena kuti zvakatenderanwa nekomiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva, yeCOPAC, havasi kutenderana nazvo.
COPAC inonzi yadaidzira musangano wechimbichimhi neMuvhuro wekuti izeye nyaya dzonetsa idzi.
NeChipiri mumwe mukuru wemauto Major General Martin Chedondo vakazivisa kuti mauto haasi kufara nebumbiro iri kunyorwa necopac vachiti rakanangana nekuda kufadza vekunze kwete kuisa zvakataurwa nevanhu.
Vamwe muZanu-PF vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti svondo rino rose change chiri chipatapata pakati pevakuru vemauto nevakaoma musoro muZanu-PF kuita misangano nezvebumbiro iri.
Vemauto nevakaoma musoro vakaisa zvikumbiro zvakati kuti kuZanu-PF izvo zvakatotambirwa nebato iri zvichaunzwa kuCOPAC neMuvhuro.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZanu-PF vanoti zanu pf yakadoma mumiriri weTsholotsho North, VaJonathan Moyo, muchikwata chavana chipangamazano muCOPAC.
VeZanu-PF vanoti vanoda kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, varambe vaine masimba akawanda uye vave ivo voga vanodoma vakuru vemauto pasina zvekuti vabatsirane neDefence Services Commission yavanenge vadoma ichizotambirwa kana kurambwa nedare reparamende.
Vemauto vanoti mubumbiro reCOPAC munewo tumwe tumitemo tusina basa twunovakanganisa basa ravo. Vemauto ava vanotiwo havasi kuda kuti muchuchusi mukuru wehurumende atorerwe mamwe masimba neNational Prosecuting Authority.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC vachimirira mdc inotungamirwa naVaWelshman Ncube, VaEdward Mkhosi, vatenda kuti pane musangano wechimbichimbi weCOPAC neMuvhuro, vakati mauto haafanire kutombopindira munyaya dzekunyorwa kwebumbiro remutemo.
VaMunyaradzi Paul Mangwana veZanu-PF vatenda kuti Zanu-PF yakabuda nezvisungo zvayo asi havana kuda kuzvitaura.
VaDouglas Mwonzora veMDC-T mumwe wemasachigaro eCOPAC vanoti mauto ari kukanganisa mabasa eCOPAC..
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda sachipangamazano cheInternational Crisis Group VaTrevor Maisiri, vanoti vari kuomesa musoro panyaya yebumbiro idzva, vanhu vari kuda kuchengetedza zvido zvavo, kwete zvenyika.